လူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ​ခေါငျးကနရေစေတငျလောငျးခြိုးခွငျး၏ ကွောကျမယျဖှယျ ဆိုးကြိုး -
HomeKNOWLEDGEလူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ​ခေါငျးကနရေစေတငျလောငျးခြိုးခွငျး၏ ကွောကျမယျဖှယျ ဆိုးကြိုး
လူတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ​ခေါငျးကနရေစေတငျလောငျးခြိုးခွငျး၏ ကွောကျမယျဖှယျ ဆိုးကြိုး
ခေါငျးကနရေစေတငျလောငျးခြိုးတာက….. ” ​လဖွေတျတတျတယျဆိုတာ” သငျ သိပါရဲ့လား ? ရခြေိုးနစေဉျ ဦးခေါငျးကို စတငျပွီး ရလေောငျးမခြိုးသငျ့ပါ။
ကြှနျမတို့ဟာ သှေးနှေးသတ်တဝါတှေ ဖွဈကွတဲ့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျက အပူခြိနျကို အလငျြအမွနျ ထိနျးညှိနရေတာကွောငျ့ပါ။ ခေါငျးကို ရလေောငျးစဉျ ခေါငျးအေးသှားတဲ့အတှကျ အပူခြိနျထိနျးညှိနိုငျအောငျ ခန်ဓာကိုယျက သှေးတှကေ ခေါငျးကို အလငျြအမွနျ လာကွတာကွောငျ့ဦးနှောကျသှေးကွော ​ပေါကျလှယျသှားပွီး လဖွေတျကာလိမျ့ကသြှားနိုငျပါတယျ။
ရခြေိုးတဲ့အခါမှာခွထေောကျကနေ စတငျရလေောငျးပွီးမှ တဖွညျးဖွညျး အပျေါပိုငျးကို ဆကျလောငျးခြိုးပါ။ အထူးသဖွငျ့သှေးတိုးရောဂါရှိသူ၊သှေးတှငျးကိုလကျစထရောမွငျ့တကျသူနဲ့ခေါငျး တဈခွမျးကိုကျဝဒေနာခံစားရသူတှဒေီရခြေိုးနညျးကို လိုကျနာသငျ့ပါတယျ Credit: ဒေါကတြာ ခငမြိုးမိုး
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ​ခေါင်းကနေရေစတင်လောင်းချိုးခြင်း၏ ကြောက်မယ်ဖွယ် ဆိုးကျိုး
​ခေါင်းကနေရေစတင်လောင်းချိုးတာက….. ” ​လေဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတာ” သင် သိပါရဲ့လား ? ရေချိုးနေစဉ် ဦးခေါင်းကို စတင်ပြီး ရေလောင်းမချိုးသင့်ပါ။
ကျွန်မတို့ဟာ သွေးနွေးသတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က အပူချိန်ကို အလျင်အမြန် ထိန်းညှိနေရတာကြောင့်ပါ။ ခေါင်းကို ရေလောင်းစဉ် ခေါင်းအေးသွားတဲ့အတွက် အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်အောင် ခန္ဓာကိုယ်က သွေးတွေက ခေါင်းကို အလျင်အမြန် လာကြတာကြောင့်ဦးနှောက်သွေးကြော ​ပေါက်လွယ်သွားပြီး လေဖြတ်ကာလိမ့်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကနေ စတင်ရေလောင်းပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း အပေါ်ပိုင်းကို ဆက်လောင်းချိုးပါ။ အထူးသဖြင့်သွေးတိုးရောဂါရှိသူ၊သွေးတွင်းကိုလက်စထရောမြင့်တက်သူနဲ့ခေါင်း တစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရသူတွေဒီရေချိုးနည်းကို လိုက်နာသင့်ပါတယ် Credit: ဒေါကျတာ ခငျမိုးမိုး
10 ရကျပဲကွိုသောကျလိုကျတာ ဆီးကြောကျ လုံးဝပြောကျသှားသော အပငျ